FIEFERANA : Zazalahy fito taona novonoina tamin’ny fomba feno mahatsiravina sy habibiana
Nisehoana trangana vono olona mahatsiravina tany Fieferana, faritra Avaradrano iny, ny sabotsy lasa teo. 10 avril 2017
Zazalahy vao fito taona monja no hita faty nanamparan’ireo tsy mataho-tody ny herisetrany ka novonoiny tamin’ny fomba feno habibiana.
Nodarohina ary nalentika tao anaty lava-bato ilay zaza. Araka ny fanazavana voaray dia nanomboka ny zoma teo no tsy hita ity zazalahy ity. Nanao ny fikarohana rehetra ny ray aman-dreniny tamin’io andro io saingy tsy nahitam-bokany izany. Nitohy hatrany ny fikarohana ka ny sabotsy teo no hita tao anaty lava-bato ny vatana mangatsiakan’ity zazalahikely ity.
Tsy lavitra ny trano fonenany ihany no nahitana azy.
Alahelo ny an’ireo nahita ity tranga ity satria tamin’ny fomba feno habibiana tokoa no namonoana azy. Raha ny fahitana ny razana dia novelesina ilay zaza ary dia mbola naforitra ihany koa ny vatany tamin’ny nandetehana azy tao anatin’ilay lava-bato nahitana ny razana.
Tsy fantatra mazava ny antony namonoana ity zazalahy ity na herisetra fotsiny ihany na antony hafa mihitsy. Efa nampandre ny mpitandro ny filaminana ny ray aman-dreniny ary efa manao fanadihadiana ireto farany.